accelerator လှို (AC အ) - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ accelerator လှို (AC အ)
accelerator လှို (AC အ)
မေ 16, 2018
acceleration / Deceleration Indicator (AC အ) လက်ရှိမောင်းနှင်အင်အားစု၏အစီအမံအရှိန်နှင့် deceleration. ဒီအညှနျးကိနျးဟာကားမောင်းအင်အားသုံးအတွက်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲမတိုင်မီဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်, အရာ, ဒါဟာသူ့ရဲ့အလှည့်, စျေးနှုန်းမတိုင်မီ၎င်း၏ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်. သငျသညျ Acceleration / Deceleration အနေနဲ့အစောပိုင်းကသတိပေးတဲ့အချက်ပြကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့လျှင်, သင်ထင်ရှားအားသာချက်များကိုပေးသည်.
အဆိုပါအချည်းနှီးလိုင်းအခြေခံအားဖြင့်ကားမောင်းအင်အားသုံးသည့်အရှိန်နှင့်အတူဟန်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှိရာအစက်အပြောက်ဖြစ်ပါသည်. Acceleration / Deceleration ချည်းနှီးထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်ဆိုပါက, ထို့နောက်သူကပုံမှန်အားဖြင့်အထက်သို့လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်ဖို့အရှိန်များအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ပါသည် (နှင့်ကိစ္စများတွင်အပြန်အလှန်ကြောင့်အချည်းနှီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခါ). Awesome ကိုလှိုနှင့်အတူအမှု၌မတူဘဲ, အဆိုပါအချည်းနှီးလိုင်းဖြတ်ကျော်သောအခါက signal ကိုအဖြစ်မှတ်မထားဘူး. စျေးကွက်ထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအောင်ပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာအရောင်ပြောင်းလဲမှုများများအတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေးအနက်ထင်ဟပ်ကယ်ဖို့, သငျသညျသတိရရမယ်: သငျသညျ Acceleration / Deceleration ၏အကူအညီဖြင့်မဝယ်နိုင်, လက်ရှိကော်လံအနီရောင်ရောင်စုံသောအခါ, သငျတို့သရောင်းချမနိုင်, လက်ရှိကော်လံအစိမ်းရောင်ရောင်စုံသောအခါ.
သင်ကားမောင်းအင်အားစု၏ညှနျကွားထဲမှာစျေးကွက်ဝင်ခဲ့လျှင် (အဆိုပါညွှန်ပြချက်အချည်းနှီးထက် ပို. မြင့်မားသည်, ဝယ်ယူသည့်အခါ, သို့မဟုတ်ပါကအချည်းနှီးထက်နိမ့်ဖြစ်ပါတယ်, ရောင်းရသောအခါ), ထို့နောက်သငျသညျကိုဝယ်ခြင်းငှါသာနှစ်ခုအစိမ်းရောင်ကော်လံလိုအပ်ပါတယ် (ရောင်းဖို့နှစ်ခုအနီရောင်ကော်လံ). အဆိုပါကားမောင်းအင်အားသုံးဖွင့်လှစ်ဖို့အနေအထားဆန့်ကျင်ညွှန်ကြားလျှင် (ဝယ်ဘို့အချည်းနှီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်ပြချက်, ရောင်းဘို့အချည်းနှီးထက်သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား), အတည်ပြုချက်လိုအပ်, ဤအရပ်မှ, တစ်ဦးအပိုဆောင်းကော်လံလိုအပ်ပါသည်. ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်တွင်ညွှန်းကိန်းရှည်လျားသောရာထူးတိုတောင်းတဲ့အနေအထားနှင့်အချည်းနှီးမျဉ်းအောက်သုံးအစိမ်းရောင်ကော်လံများအတွက်အချည်းနှီးလိုင်းကျော်သုံးအနီရောင်ကော်လံကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်.
AC အဘားဇယား၏တန်ဖိုးခြားနားချက် 5/34 အဆိုပါကားမောင်းအင်အားသုံးဘားဇယားနှင့် 5-ကာလရိုးရှင်းသောရွေ့လျားနေသည့်ပျှမ်းမျှ၏, ကြောင်းဘားဇယားထဲကနေယူ.
AO = SMA(ပျမ်းမျှဈေးနှုန်း, 5)-high School တွင်(ပျမ်းမျှဈေးနှုန်း, 34)
AC အ = to-SMA(TO သို့, 5)
SMA - ရိုးရှင်းသော Moving ပျမ်းမျှ;
AO - Awesome ကိုလှို.
accelerator လှို (AC အ) တစ်ဦး Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
accelerator လှို (AC အ) သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Accelerator လှို install လုပ်နည်း (AC အ).mq4?
Accelerator လှို Download (AC အ).mq4
Copy ကူး Accelerator လှို (AC အ).သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Accelerator လှိုပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး (AC အ).mq4
indicator Accelerator လှို (AC အ).mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
Accelerator လှိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို (AC အ).သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ mq44ဇယား?
Next ကိုဆောင်းပါးDoji ဖယောင်းတိုင်ထောက်လှမ်းခြင်း